Dire Dawa ,Isku Soobax aay ka qaybgaleen boqolkun oo qof oo lagu soo dhaweeyay sadex magaalo oo dib ugu soo noqday maamulka soomaalida ethiopia | Biyoguurenews.com
Home Wararka Dire Dawa ,Isku Soobax aay ka qaybgaleen boqolkun oo qof oo...
Dire Dawa ,Isku Soobax aay ka qaybgaleen boqolkun oo qof oo lagu soo dhaweeyay sadex magaalo oo dib ugu soo noqday maamulka soomaalida ethiopia
Dadka isu soo baxa sameeyay ayaa taageero u muujinayay go’aan ay qaadatay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ay kaga noqotay go’aan horey sadex degmo oo maamulkaasi ka mid ah loogu daray maamulka gobolka Cafarta.
Go’aankan ayaa xalay ka soo baxay Golaha Wasiirada dowladda Soomaalida, iyagoo meesha ka saaray go’aa muddo sadex sanadood haatan laga joogo degmooyinkaasi lagu hoos geeyay gobolka Cafarta oo ku yimid heshiis xukumaddii Cabdi Maxamud Cumar ay la gashay maamulka Cafarta.
Addis Chekol, wariye qeynbta Oromada ee VOAda uga soo warama Dir Dhabe ayaa soo sheegaya in dadkii mudaaraharaadka dhigayay ay ka muuqatay farxad, iyagoo ku dhawaaqayay hal ku dhegyo la mid ah iyagoo xuriyadda hadda un qaatay.
Xisbiga Mucaaradka ee Cafarta ee Afar People’s Party ayaa iyagu ka soo horjeestay go’aankan cusub, iyagoo ugu baaqay dowladda Federalka ee Ethiopia inay soo fara geliso arrintan.
Sadexdan degmo oo tan iyo markii Cafarta lagu daray uu murran xooggan ka taagnaa, dadka labada dhinacna ay ku dagaalameen dhowr jeer ayaa waxaa ku badan Soomaalida.
Previous articleWasiirka Diinta iyo Awqaafta jamhuuriyada Somaliland oo ka Hadlay Bisha ramadaan Curashadeeda
Next articleMadaxweynaha Vietnam oo la waayay meel uu jaan iyo cirib dhigay